Ny Fanaovana Lohamboto no vahaolana · Global Voices teny Malagasy
Ny Fanaovana Lohamboto no vahaolana
Voadika ny 29 Jona 2017 11:06 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny No0vambra 2005)
Voamariky ny herisetra sy ny tsy fetezana niparitaka be ny andiany faharoa tamin'ny fifidianana Ejiptianina. Iray no maty ofisialy nandritra ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana ary maro no naratra. Saingy nilaza ny gazetin'ny mpanohitra fa efatra no maty tamin'izay andro izay. Andro vitsivitsy taty aoriana lehilahy iray hafa no maty nisy namono ary 21 no naratra tamin'ny fifandonana mikasika ny fifidianana. Mpikatroka 450 avy amin'ny Fiarahalahiana Miozolomana (MB) no nogadraina, navotsotra ny ankamaroan'izy ireo andro vitsivitsy taty aoriana.
Tamin'ny andro nanaovana ny fihodinana voalohany tamin'ny andiany faharoa. Nanapa-kevitra ny hisangy loza ary handeha hijery ny zavatra niseho tany amin'ny faritra maro tao Alexandra i Mohammed niaraka tamin'i Haisam sy hafa vitsivitsy.
Tao anatina lahatsoratra lava be anankiroa, mamaritra ny zavatra hitany (Arabo) i Mohamed; sabatra, antsy, tapa-kazo, fividianana vatom-pifidianana, tsy fihetsehan'ny polisy, jiolahimboto mandrangitra mpifidy, fifandonana teo amin'ny MB sy jiolahimboto, fiara vaky fitaratra anoloana. Nisy fotoana i Haisam voadaroky ny iray amin'ireo jiolahimboto tao amin'ny hatony. Raha toa ka voaroaka tao amin'ny làlana iray ry zareo no sady voaenjika sy voaompanà tompona fivarotana kafe iray izay namadika ny teram-pivarotany ho foibe hikarakarana fividianana vatom-pifidianan'ny NDP.
Nanatri-maso jiolahimboto nidaroka vehivavy nanohana ny MB i Haisam teo anoloan'ny biraom-pifidianana iray. Naheno avy tamin'ny olona hafa nanatri-maso tsy fetezana midadasika maro ihany koa ry zareo, toy ny famakiana vata fandrotsaham-bato, fifandonana, olona naratra ary ilay lehilahy maty nisy namono.
Nilaza i Mohammed fa nahatsapa izy fa toy ny fandrakofana ady fa tsy fandrakofana fifidianana ity izy.
Nizara sary maro avy amin'ny fampitam-baovao an-tariby momba ireo fifandonana sy ady ny Bigpharoh. Raha ny Egyptian Conscience kosa nizara sary vitsivitsy sasany nalainà mpitia maka sary ny .
Mamaritra ny zava-niainany tamin'ny fifidianana (Arabo) tamin'iny andro iny i Wa7da Masrya ary ny fomba naneren'ny mpanohana ny MB azy mba hifidy azy ireo. Nefa tsy nety izy.
Ho valin'ity fihodinana mihoson-drà ity, mbola miandry ny famerenana-fihodinana izahay. Na izany aza, nahazo seza 14 tsara antoka ny MB. Nanao ny kajy i Sandmonkey:
Tongasoa amin'ny fihodinana faharoan'ny fifidianana solombavambahoakantsika. Izaho no Sandmonkey, ary izaho no ho mpampiantrano anareo androany alina. Hatreto aloha dia fantatsika fa nahazo seza 14 ny MB, izay mitondra ny isa farany azony ho 48 seza, ary mety hiditra anatina fifidianana 4 hafa ahitàna izay tena fanapahankevitra farany, izay, raha toa ka azony, dia hanome azy seza 50, avo 3 heny amin'izay nananany tamin'ny fifidianana farany. Raha vao mahatratra seza 60 izy dia ho sarotra ny handà antoko ho azy, ary rehefa mahatratra seza 65 dia ho afaka ny hanao ny kandidàny ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo ry zareo. Oh Fifaliana.
Toy ny zavatra nitranga tamin'ny herinandro lasa vitsivitsy teo, ity misy famintinana ny dingana voalohany
Nanao fiaraha-mirona manohitra ny NDP ny mpanohitra, raha toa ka tsy niditra tamin'izany mandatehezana izany ny Fiarahalahiana Miozolmana. Samy anisan'ireo tena hita be indrindra ny fampielezankevitra NDP sy MB. Miaraka amin'ny teny fanevan'ny MB ”Ny Finoana Silamo no vahaolana”.
Taorian'ny fihodinana voalohany sy faharoan'ny andiany voalohan'ny fifidianana dia nahazo seza 34 ny MB (40 taorian'ny fihodinana voalohany tamin'ny andiany faharoa). Nahazo ny ankamaroan'ireo seza sisa tavela ny NDP sy ireo tsy miankina niaraka tamin'ny NDP. Raha toa ka nahazo seza 8 fotsiny ny mpanohitra. Miaraka amin'ny fahaverezan'ny sezan'ireo mpitarika azy malaza indrindra.